Banyere Anyị - Ningbo Dahongying Bioengineering Co., Ltd.
Eke na VE ọkachamara
Ningbo Dahongying Bioengineering Co., Ltd. (Est.1998) emi odude ke Ningbo - aku center na Ndida nke Yangtze River Delta. Ịbụ emechi ka Ningbo Port nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ, na nwere oké ala uru dị ka ọ n'ihu Shanghai na ugwu. The Company bụ a green na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi enterprise na biotech ụlọ ọrụ, na e ọdịda ọtụtụ utu aha na-adịbeghị anya, ọ na-ekesịpde ọtụtụ enọ na ubi nke onwe-ọhụrụ, ike ịzọpụta, gburugburu ebe obibi-echebe ma na ọha na eze ọrụ ebere.
The Company bụ ihe mbụ na emeputa nke Natural VE na China, ma e ọkachamara na mmepụta nke Natural VE maka ọtụtụ iri afọ nke afọ. Ọ na-elekwasị anya ya ntị na-enye ike nri na-eduga na Usoro na àgwà-ejere gburugburu ụwa. Ebe ọ bụ na ya oruru, na Company ruo na management ike na usoro ọhụrụ. Dabere na management echiche nke Human Dabere, ụlọ ọrụ nwere ike ụda àgwà nkwa usoro na-ekwe nkwa na elu mma ngwaahịa.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ nwere ghọtara dị ebube akụkọ ihe mere eme, e nwere ka a ogologo ụzọ na-aga na-eme n'ọdịnihu. Naanị site elu uzu ma ọgaranya management ahụmahụ, ọnụ na ime mmụọ mma nke "Green, Healthy Obi Ụtọ", anyị nwere ike nweta ihe mgbaru ọsọ nke na narị afọ iri na enterprise na ụwa a ma ama ika. Anyị kwenyere na, site na anyị na-arụsi ọrụ, Dahongying ga-aghọ a kpakpando ututu nke Natural VE.
Ọ bụrụ na i nwere mmasị na anyị na ngwaahịa ma ọ bụ nwere ajụjụ ọ bụla, biko na-eche free ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-atụ ka ekwenye mmekọrịta gị na n'ọdịnihu dị nso.